အမေဇုံမှအထူးကူပွန်ကဤသေးငယ်သော 36 $ spy ကင်မရာကို 11 $ သို့လျှော့ချပေးသည် - BGR - TELES RELAY
မူလစာမျက်နှာ » အပေးအယူ »အထူး Amazon ကူပွန်သည်ဤသေးငယ်သော 36 $ spy ကင်မရာကို 11 $ - BGR သို့လျှော့ချပေးသည်။
Amazon မှအထူးကူပွန်ကဤသေးငယ်သော 36 $ spy ကင်မရာကို 11 $ - BGR သို့လျှော့ချပေးသည်
အားပြန်သွင်းနိုင်ပြီးဝှက်ထားသောအားပြန်သွင်းနိုင်သည့်ကြိုးမဲ့သူလျှိုကင်မရာ  အိတ်ဆောင် Victure 1080P သေချာတာပေါ့ငါတို့မြင်ဖူးသမျှထဲမှာအသေးငယ်ဆုံးသူလျှိုကင်မရာမဟုတ်ပါဘူး။ သို့သော်ယခုအချိန်တွင်၎င်းသည်အလွန်နိမ့်သောစျေးနှုန်းဖြင့်ဒေါ်လာ 10,79 ဖြင့်ရောင်းချပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ဖူးသမျှတွင်စျေးအသက်သာဆုံးသူလျှိုကင်မရာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Full HD 1080p resolution နှင့်ညဉ့်ရူပါရုံကိုထောက်ပံ့သည်။ အသံသွင်းမှုကိုအလိုအလျောက်စတင်နိုင်ရန်အတွက်ပါ ၀ င်သည့်ရွေ့လျားမှုထောက်လှမ်းရေးစနစ်ပါ ၀ င်သည်။ Amazon စာမျက်နှာပေါ်ရှိကူပွန်ကိုဖြတ်ပြီးအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောစျေးနှုန်းရရန်ကူပွန်ကုဒ်နံပါတ် 45DW8WN6 ကိုအသုံးပြုပါ။ ကူပွန်သည်မနက်ဖြန်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည်ဟုယူဆသည်၊ သို့သော်ဤဈေးနှုန်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စတော့ရှယ်ယာမတိုင်မီကောင်းစွာကုန်တော့မည်ဟုထင်မြင်ကြသည်။ တနည်းအားဖြင့်အလျင်အမြန်!
[အသေးစားအိတ်ဆောင်သူလျှိုလျှို့ဝှက်ကင်မရာ] .HD အိတ်ဆောင်လျှို့ဝှက် 1080p ဝှက်ထားသောကင်မရာ (2.4G တစ်ခုတည်းသာ)၊ အရွယ်အစားသေးငယ်ပြီးဖုံးကွယ်ရန်လွယ်ကူသည်။ လုံခြုံရေးကင်မရာနှင့်ကလေး / အဟောင်းမော်နီတာအနေဖြင့်စုံလင်ပါသည်။ အာရုံစူးစိုက်မှုမရှိဘဲဓာတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
[Activated Motion Detection] ရွေ့လျားမှုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းစတင်သောအခါ၊ ၎င်းသည် real-time monitoring နှင့် remote monitoring အတွက်မိုဘိုင်းဖုန်းသို့အချက်ပေးမှုကိုအလိုအလျောက်ပို့ပေးသည်။ စောင့်ကြည့်ရေးအတွက်ပြီးပြည့်စုံသော!
[1080P ဗွီဒီယို resolution နှင့် Built-in ဘက်ထရီဖုံးထားသောကင်မရာ]: 1920 * 1080P HD ဗွီဒီယိုကြည်လင်ပြတ်သားမှုကရုပ်ပုံနှင့်ဗွီဒီယိုကိုရှင်းလင်းစေသည်။ ဤလျှို့ဝှက်ကင်မရာတွင် 340 mAh ပါ ၀ င်သည့်ဘက်ထရီပါရှိပြီး၎င်းသည် 45 မိနစ်ခန့်ကြာအောင်လည်ပတ်စေသည်။
[စူပါကျယ်ပြန့်သောရှုထောင့်နှင့်ကြည်လင်ပြတ်သားသောညဥ့်အမြင်] - စူပါကျယ်ပြန့်သောထောင့်၊ လင်းနင်းမှုမရှိသည့် 10 အနီအောက်ရောင်ခြည် LED များ၊ ညမြင်ကွင်းအကွာအဝေး5မီတာ၊ သင်သည်မှောင်မိုက်နေသည့်ပုံကိုတွေ့နိုင်သည်။ 19659007] အသုံးပြုရန်လွယ်ကူသည်။ ဤဝှက်ထားသောကင်မရာသည်သံမျက်နှာပြင်များ၊ နံရံများ၊ ပြတင်းပေါက်များ၊ စင်များသို့မဟုတ်စားပွဲအောက်၌စုပ်ယူနိုင်သည်။
လိုက် Twitter ပေါ်တွင် @BGRDeals နောက်ဆုံးပေါ်နှင့်အကြီးမားဆုံးသောက်ဘ်ဆိုက်ကိုလိုက်နာရန်။ ပမာဏကန့်သတ်ဖြစ်နိုင်သည်။ စျေးနှုန်းများအသိပေးစာမပါဘဲပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြပြီးကူပွန်မည်သည့်အချိန်တွင်မကုန်ဆုံးစေနိုင်သည်။ တချို့ကကမ်းလှမ်းမှုအားလုံးဖောက်သည်များအတွက်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ BGR ဤဆောင်းပါးကိုတဆင့်ထားရှိအမိန့်အပေါ်တစ်ဦးကော်မရှင်လက်ခံရရှိလိမ့်မည်။
အလျင်အမြန် 110 $ - BGR အတွက်သာ Qi ကြိုးမဲ့အားသွင်းခြင်းဖြင့်ဤစစ်မှန်သော 71 $ ကြိုးမဲ့နားကြပ်ကိုယူပါ။
$7gadget တစ်ခုသည်သင်၏ toolbox ထဲရှိရှုပ်ပွနေသောတဝက်ကို BGR မှအစားထိုးနိုင်သည်
Angelina Jolie သည် Brad Pitt အားသူ၏သား - VIDEO နှင့်စကားပြောဆိုရန်ကြိုးစားသည်
PSG PSG မန်နေဂျာ Di Maria ကတိုက်ခိုက်မှုများအတွက် Boulevards အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည် FOOT 01